Indlela yokufundisa abantwana malunga nokulinganisa izinto
Icandelo elilinganayo lomlinganiselo linika indawo yokubhekisa apho izinto zokulinganisa, ubude, okanye amandla zingachazwa. Nangona imilinganiselo yinto ebalulekileyo yobomi bemihla ngemihla, abantwana abaqondi kakuhle ukuba kukho iindlela ezahlukeneyo zokulinganisa izinto.
IiMigangatho eziMgangatho oMgangatho kunye neeNgenigxina
Unyunithi oqhelekileyo wokulinganisa ulwimi olungenakuthenjwa olunceda wonke umntu ukuqonda umbutho wezinto kunye nomlinganiselo.
Ibonakaliswe ngamasentimitha, iinyawo kunye neepounds, eUnited States, kunye neesentimitha, iimitha, kunye neekhilogram kwi-metric system. Umqulu ulinganiswa ngama-ounces, iikomityi, ii-quints, iigote, kunye neegoloni e-US kunye ne-milliliters kunye neelitha kwi-metric system.
Ngokwahlukileyo, iyunithi engalinganiyo yokulinganisa yinto engafaniyo ngobude okanye ubunzima. Ngokomzekelo, iibhulabhu azithembeki ekufumaneni indlela enzima ngayo into yokuba imarble nganye iya kuba yinto ehlukileyo kunezinye. Ngokufanayo, unyawo lomntu alukwazi ukusetyenziswa ukulinganisa ubude ngenxa yokuba unyawo lomntu lubukhulu obuhlukile.
Units Standard kunye neNtsana yabantwana
Abantwana abaselula banokuqonda ukuba amagama athi "ubukhulu," "ukuphakama," kunye "nomthamo" anxulumene nokulinganisa. Kuya kuthatha ixesha ukuqonda ukuba ukwenzela ukuthelekisa nokwahlula izinto okanye ukwakha kwinqanaba, wonke umntu ufuna ukuqala okufanayo.
Ukuqala, cinga ukuchazela umntwana wakho ukuba kutheni imilinganiselo efanelekileyo yokulinganisa imfuneko.
Ngokomzekelo, umntwana wakho uyaziqonda ukuba unalo igama, njengezihlobo, abahlobo kunye nezilwanyana. Amagama abo ancedisa ukuba ngubani abo kwaye abonisa ukuba bangabantu. Xa uchaza umntu, usebenzisa i-identifiers, njenge "amehlo aluhlaza," kunceda ukucacisa iimpawu zomntu.
Izinto kunye negama.
Ukuqatshelwa okuqhubekayo kunye nenkcazo yento inokufezekiswa ngokusebenzisa iiyunithi zokulinganisa. "Itafile ende," umzekelo, unokuchaza itafile yobude obuninzi, kodwa akutsho ukuba i-table itheni kangakanani. "Itafile ezinamathela ezintlanu" zichaneke ngakumbi. Nangona kunjalo, le nto abantwana baya kufunda xa bekhula.
I-Experiment Measurement Testement
Ungasebenzisa izinto ezimbini ekhaya ukubonisa le nto: itafile kunye nencwadi. Bobabini kunye nomntwana wakho unokuthatha inxaxheba kulo mvavanyo.
Ukubamba isandla sakho siqinile, linganisa ubude betafile ngesandla. Zingaphi ezandleni zakho zithatha ukuthatha ubude betafile? Bangaphi isandla somntwana wakho? Ngoku, linga ubude bencwadi ngesandla ngesandla.
Umntwana wakho unokuphawula ukuba inani lezandla ezifunekayo ukulinganisa izinto zihluke kunokuba inani lezandla lithatha ukuba ulinganise izinto. Oku kungenxa yokuba izandla zakho zibukhulu obuhlukeneyo, ngoko awusebenzisi isilinganiselo esilinganiselweyo sokulinganisa.
Ngeenjongo zomntwana wakho, ukulinganisa ubude kunye nokuphakama kwizicatshulwa zephepha okanye ukuhamba ngesandla, okanye ukusebenzisa iipenki kwinqanaba lokulinganisela umlinganiselo, lisebenza kakuhle, kodwa ezi ziyimilinganiselo engavumelekanga.
I-Standard Standard Measurement Experiment
Xa umntwana wakho eqonda ukuba izixhobo zesandla ziyizilinganiso ezingenasigxina, zichaze ukubaluleka kweyunithi yokulinganisela.
Unokuthi, umzekelo, ubonise umntwana wakho kumlawuli onyawo omnye. Ekuqaleni, ungakhathazeki malunga nesigama okanye imilinganiselo encinci kumlawuli, nje ingcamango yokuba le nto ibambelela "inyawo elinye." Batshele ukuba abantu ababaziyo (ootata-ntombi, ootitshala, njl njl.) Bangasebenzisa intonga njengaleyo ukulinganisa izinto ngendlela efanayo.
Vumela umntwana wakho alinganise itafile kwakhona. Zingaphi iinyawo? Ingatshintsha xa ulinganisa kunokuba umntwana wakho? Chaza ukuba akunandaba ukuba ngubani na amanyathelo, wonke umntu uya kufumana umphumo ofanayo.
Hambisa malunga nekhaya lakho kwaye ulinganise izinto ezifanayo, ezifana nomabonwakude, i-sofa okanye umbhede. Emva koko, ncedise umntwana wakho ukuba alinganise ukuphakama kwawo, eyakho, nelungu ngalinye lentsapho yakho.
Ezi zinto eziqhelekileyo ziya kunceda ukubeka ingcamango ubuhlobo phakathi komlawuli kunye nobude okanye ukuphakama kwezinto.
Iingcamango ezinjengobunzima kunye nomthamo onokuza emva koko kwaye akulula kulula ukuzisa abantwana abancinci. Nangona kunjalo, umlawuli uyinto ebonakalayo engakwazi ukuthuthwa kwaye isetyenziswe ukulinganisa izinto ezininzi ezungeze kuwe. Iimvana ezininzi zize zize zibonwe njengomdlalo omnandi.
Ukukhawuleza Kwenzeka Njani I-Gunball?
Ukujonga kwi-Software Designer Software nge-Architect Chief
Yintoni i-Fat Molecule?
I-Commodore Isaac Hull kwiMfazwe ka-1812